Myanmar Idol မှာ အမြိုးသမီး Winner ထှကျပျေါ တော့မယျလို့ ခနျ့မှနျးပွောဆိုနေ – Askstyle
Myanmar Idol မှာ အမြိုးသမီး Winner ထှကျပျေါ တော့မယျလို့ ခနျ့မှနျးပွောဆိုနေ
အသက်ရှူရပ်မတတ်ရင်ခုန်ရသော မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့Result show ကတော့ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဟာလည်း အံ့မခန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး Final ကို ပြိုင်ပွဲဝင်အကုန်လုံးကို ခေါ်ယူသွားချင်လောက်အောင်ဖြစ်စေပါတယ်။
မြန်မာအိုင်ဒေါကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရသူနှစ်ဦးကတော့ Wild Card နဲ့ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ တန်ခွန်ကျော် နဲ့ Mooler တို့ဖြစ်ပါတယ်။Final မှာ Winner ဖြစ်ဖို့အတွက်အကြိတ်အနယ်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်သူ(၃)ဦးကတော့ ဘင်ဂျမင်ဆုမ်း၊အေးမြဖြူနဲ့အက်စတာဒေါ့ချင်းဆုန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန် ထိ တခါ မှ အမျိုးသမီး Winner မထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့Myanmar Idol မှာတော့ ဒီနှစ်မှာ အမျိုး သမီး နှစ်ေ ယာက်၊ အမျိုးသားတစ်ယောက် Grand Final ကို တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။Season 1 မှာတော့ စောလား ထော်ဝါးက winner ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Season2မှာဆိုရင် သားငယ်နဲ့ ဘီလီလမင်းအေးတို့ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်ခဲ့ကာ သားငယ်က Season2ရဲ့ Winner ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Season3မှာဆိုရင်တော့ ဖြိုးမြ တ်အောင်နဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို တို့ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ် ကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက ကျန်း မာရေးေ ကြာင့် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
Season3ရဲ့ Winner က ဖြိ်ုးမြတ်အောင်ပါ။ဘယ်တုန်းကမှ အမျိုး သမီး Winner မရခဲ့ဖူးတဲ့ Myanmar Idol မှာတော့ ဒီတစ်ခေါက် Season4မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အမျိုးသမီး winner ထွက်ပေါ် လာ တော့မယ်လို့ ပရိသတ်အများစု ကတော့ ခန့်မှန်း ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ပရိသတ် ကြီး ရဲ့ အမြင် က ရော…….?
အသကျရှူရပျမတတျရငျခုနျရသော မွနျမာအိုငျဒေါရဲ့Result show ကတော့ ကငျြးပပွီးစီးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ပွိုငျပှဲဝငျမြားရဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှုတှဟောလညျး အံ့မခနျးဖွဈခဲ့ပွီး Final ကို ပွိုငျပှဲဝငျအကုနျလုံးကို ချေါယူသှားခငျြလောကျအောငျဖွဈစပေါတယျ။
မွနျမာအိုငျဒေါကိုနှုတျဆကျထှကျခှာခဲ့ရသူနှဈဦးကတော့ Wild Card နဲ့ပွနျလညျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ တနျခှနျကြျော နဲ့ Mooler တို့ဖွဈပါတယျ။Final မှာ Winner ဖွဈဖို့အတှကျအကွိတျအနယျဆကျလကျယှဉျပွိုငျရမယျ့သူ(၃)ဦးကတော့ ဘငျဂမြငျဆုမျး၊အေးမွဖွူနဲ့အကျစတာဒေါ့ခငျြးဆုနျတို့ပဲဖွဈပါတယျ။
အခုခြိနျ ထိ တခါ မှ အမြိုးသမီး Winner မထှကျပျေါခဲ့ဖူးတဲ့Myanmar Idol မှာတော့ ဒီနှဈမှာ အမြိုး သမီး နှဈေ ယာကျ၊ အမြိုးသားတဈယောကျ Grand Final ကို တကျရောကျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။Season 1 မှာတော့ စောလား ထျောဝါးက winner ဖွဈခဲ့ပါတယျ။Season2မှာဆိုရငျ သားငယျနဲ့ ဘီလီလမငျးအေးတို့ နောကျဆုံး ဖိုငျနယျကို တကျရောကျခဲ့ကာ သားငယျက Season2ရဲ့ Winner ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Season3မှာဆိုရငျတော့ ဖွိုးမွ တျအောငျနဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြို တို့ နောကျဆုံး ဖိုငျနယျ ကို တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုက ကနျြး မာရေးေ ကွာငျ့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျနိုငျခွငျးမရှိခဲ့ပါဘူး။ Season3ရဲ့ Winner က ဖွိုးမွတျအောငျပါ။ဘယျတုနျးကမှ အမြိုး သမီး Winner မရခဲ့ဖူးတဲ့ Myanmar Idol မှာတော့ ဒီတဈခေါကျ Season4မှာ ပထမဆုံးအကွိမျ အမြိုးသမီး winner ထှကျပျေါ လာ တော့မယျလို့ ပရိသတျအမြားစု ကတော့ ခနျ့မှနျး ပွောဆိုနကွေပါတယျ။ပရိသတျ ကွီး ရဲ့ အမွငျ က ရော…….?